မထင်မှတ်ထားတဲ့ အံဩစရာတွင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ PDF လူငယ်လေးတွေ – MC Tv Club
မထင်မှတ်ထားတဲ့ အံဩစရာတွင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ PDF လူငယ်လေးတွေ
6 . 11 . 2021 ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ KNDF B-09 မှ နယ်မြေရှင်းလင်းမှု ပြုလုပ်နေစဥ် (စကစ)တို့၏ စခန်းချရာ အနီးသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုစခန်းချရာ​နေရာအနီး၌ ပြည်သူနှစ်ဦးအား မြေမြုပ်ထားသော ရုပ်အလောင်း နှစ်လောင်းကို တွေ့ရှိပြီး ထိုရုပ်အလောင်းများမှာ (စကစ)၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဒဏ်ခံခဲ့ရသည်ဟု ယူဆရပါသည်။ ထိုရုပ်အလောင်းများ၏ လည်ပင်းတွင် ကြိုးကွင်းစွတ်ထားပြီး နှစ်ဦးစလုံးကို ကွေးလျှက် အနေအထားဖြင့် အတူ မြေမြုပ်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည် ။ ထိုရုပ်အ​လောင်းများကို KNDF B-09 မှ ပြန်လည်တူးဖော်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ သဂြိုလ် ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Previous Article မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ နယ်မြေမလုံခြုံမှု့နဲ့ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေကြောင့် အရေးပေါ်အကူအညီပေးဖို့ အင်မတန်ခက်ခဲနေတယ်လို့ ကုလပြော
Next Article ကလေးမြို့ PDF ညီမငယ်လေးတွေရဲ့ သင်တန်းဆင်းပွဲပြီးကြီး အောင်မြင်စွာပြီးသွားခဲ့ပါပြီ